China Aluminium alloy n'ime window window usoro ngwaike Nrụpụta na ụlọ ọrụ | Yuqiang
Akụrụngwa maka Windows & Door nke Aluminium, nke bụ ezigbo usoro ihe eji eme windo windo usoro ngwaike usoro windo Aluminom.
1. Ndị ahịa nwere ike họrọ ụdị aka ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ anyị dị ka iwebata usoro aka na mpio ndepụta ngwaahịa.
2. Enwere ike iji ya maka profaịlụ alloy alloy 20-slot European
3. Kwesịrị ekwesị maka ụdị windo nwere obosara nke 340-1600mm na ịdị elu windo nke 400-2400mm. Enwere ike ịhazi isi mkpọchi dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị
Aluminom Alloy Inner Casement Window Series Hardware Sistem ma ọ bụ Mkpọchi ngwaike mkpọchi abụọ maka windo mepere emepe na-anabata teknụzụ na-anwụ anwụ na-akpụ akpụ iji hụ na nha nha na nhazigharị ọka, na-eji akụrụngwa mbụ nke ụlọ ọrụ, usoro mmepụta gụnyere. mgbatị, ịpị ọkpọ, stampụ, ịgbanye oghere oghere, ịgbakọ, inyocha, mbukota.
Nchịkọta Nchịkọta nke nhazi ngwaike nke usoro windo windo ime ụlọ
Ogwe Drive Center
Mkpọchi mkpọchi ala
Ọnọdụ ikuku ikuku nke Europ
Aluminom Alloy Inner Casement Window Series Hardware System
Ihe osise nwụnye nke aluminom alloy n'ime window window
Wụnye dị ka eserese 1, eserese 2, eserese 3 ...
Ngwa dị iche iche dị iji gboo mkpa gị dị iche iche, ọ ga -adịkwa ogologo oge.
Jiri akụrụngwa nnwale iji nwalee ngwaahịa ndị ahụ, kpuchie ihuenyo site na oyi akwa, ma jikwaa ogo ya.
Enwere ike ịhazi ya dabere na eserese na nlele, anyị ga -enyekwa gị ezigbo azịza.
Afọ nke ahụmịhe ụlọ ọrụ na akụrụngwa na -akwado ihe nwere ike ịhazi ngwaahịa gị.
Okwu ikpe dị n'ime Aluminom
Aha ngwaahịa: aluminom alloy ime igbe windo sistemụ ngwaike
Mgbabere uzo (mgbabere uzo na-agbanwe agbanwe, mgbanaka nku atọ)
Njirimara ngwaahịa: ibu 90kg na-ebu ibu, aka ekpe na aka nri na-agbanwe, nrụnye ngwa ngwa, nnyefe dị larịị, enweghị mkpọtụ
Nke gara aga: UPVC windo windo windo windo sistemụ ngwaike
Osote: Akụrụngwa maka sistemụ windo tụgharịa & tilt